देखाउन खोजेको के ?... (फोटो फिचर) स्पेसखबर
विकिनी अवतारमा दिशाको हट फोटो सुट (फोटो फिचर) ! बलिउडकी एक अभिनेत्री आफ्ना फिल्मभन्दा पनि हट अवतारमा गरिएको फोटो सुटका कारण चर्चामा छिन् । यस्तै भाग्यमानी हट गर्ल दिशा पटानी बलिउड प्रवेश गरेसँगै चर्चामा छिन् । उसो त ...
फेवातालमा सोनिकासँग मस्ती गर्दै पारस विभिन्न महिलाहरुसँग नाम जोडिएर विवादमा आउने गरेका पूर्व युवराज पारस शाह आजकाल युट्युबर एवं मोडल सोनिका रोकायसँग निरन्तर देखिइरहेका छन्।
किम्फमा २९ देशका ६६ फिल्म ! काठमाडौं इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) मंसिर २५ गतेदेखि सुरु हुँदै छ । यसपटकको किम्फमा २९ देशका ६६ फिल्म देखाइनेछ ।
‘मिस वर्ल्ड’को भोटिङ राउन्डमा नेपालकी अनुष्का दोस्रो डिसेम्बर १४ मा हुने ‘मिस वर्ल्ड’ प्रतियोगितामा नेपालसहित १ सय २४ मुलुकका सुन्दरी सहभागी भएका छन् । अहिले भने भोटिङ राउन्ड चलिरहेको छ ।
यस्तो बन्यो ‘दी कर्मा’को टिजर नेपाली फिल्म ‘दी कर्मा’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक टिजरमा नीता ढुंगाना, परमिता राज्यलक्ष्मी राणा, बुद्धि तामाङ र भारतीय कलाकार करण बर्मा देखिन्छन् ।
स्वर सम्राट नारायण गोपालको २९ औं स्मृति दिवस मनाईँदै आज स्वर सम्राट नारायण गोपालको २९ औं स्मृति दिवस मनाईँदैछ। विक्रम सम्बत १९९६ सालमा काठमाडौंको किलागलमा जन्मेका नारायण गोपालको २०४७ साल मंसिर १९ गतेका दिन निधन भएको थियो।
भुतुक्कै पार्ने पद्मा लक्ष्मीको फिगर यस्तो ! (फोटो फिचर) प्राय: सेलिब्रिटीहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । आफ्ना फ्यानहरुका लागि भन्दै उनीहरुले बेला-बेला तस्बिरहरु सेयर गरिरहेकै हुन्छन् ।
यस्तो बन्यो ‘सेल्फी किङ’को टिजर (भिडियोसहित) नेपाली फिल्म ‘सेल्फी किङ’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । युट्युबबाट सार्वजनिक गरिएको टिजरमा मुख्य पात्र विपिन कार्कीको क्यारेक्टरलाई देखाइएको छ ।
मंसिर २१ मा ऋचाले झ्याइँ पार्ने ! अभिनेत्री ऋचा शर्माले यही मंसिर २१ मा झ्याइँ पार्ने भएकी छन् । यानि उनी बेहुली बन्नेछिन् ।
दौरा सुरुवाल लगाउँदै प्रबल गुरुङले भने– यो मन त मेरो नेपाली हो नेपाली मूलका अमेरिकी फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङले नेपाली पोशाकसहितको आफ्नो फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। उनले दौरा, सुरुवाल, टोपी र कोटलगाएको फोटो ट्वीटरमा राख्दै लेखेका छन्– यो मन त मेरो ...
लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा ५ सदस्य र १३ सल्लाहकार मनोनीत राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्यमा ५ र सल्लाहकारमा १३ जनालाई मनोनयन गरिएको छ ।
लाइट ग्रिनमा बोल्ड वाणी ! (फोटो फिचर) बलिउड अभिनेत्री वाणी कपुरले ‘हरे राम’ लेखेको विकनी लगाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएकी थिइन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा त्यही बिकिनीसहितको तस्बिर पोस्ट गरेपछि विवादमा मुछिएकी हुन् ।
नरम गीत तिखो प्रहार : म रोएको पल... (भिडियोसहित) नेपाली गीत संगीतको बजारमा अर्को एक मेलोडियस आधुनिक गीत थपिएको छ ..म रोएको पल ।
हेरौं-हेरौं लाग्ने नीलमका 'बोल्ड पोज' (फोटोफिचर) भारतीय मूलकी बेलायती मोडल नीलम कौर गिल निकै आकर्षित छिन् । उनलाई भारतभन्दा पनि बेलायतीले मज्जैले चिन्छन् ।
रामकुमारको ‘कालापानी हाम्रै हो’ भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटेपछि गायक रामकुमार कार्कीले देशभक्ति पूर्ण गीत ‘कालापानी हाम्रै हो’ सार्वजनिक गरेका छन् ।